WARBIXIN: Shantii qalad ee uu galay macallin Antonio Conte ee saameynta ku yeeshay xilli ciyaareedka Chelsea oo daaha laga rogay! – Gool FM
WARBIXIN: Shantii qalad ee uu galay macallin Antonio Conte ee saameynta ku yeeshay xilli ciyaareedka Chelsea oo daaha laga rogay!
Byare May 9, 2018
(London) 09 Maajo 2018. Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa xilli ciyaareedkan waxa ay ku bilowdeen dar-dar awood badan ku dhisan, waxaana ay diyaar u ahaayeen inay difaacdaan horyaalka Premier League, laakiin ma dhicin.
The Blues ayaa ku fashilantay xilli ciyaareedkan horyaalka inay difaacaan maadaama xilli ciyaareedkii kan ka horreeyey ay iyagu ku guuleysteen EPL, waxaana taas xigtay in xilli horeba lagu soo reebay heerka bux-baxa Champions League.
Haatan kooxda uu hoggaamiyo macallin Antonio Conte waxa ay dagaal ugu jiraan sidii ay uga mid noqon lahaayeen afarta kooxood ee ugu sarreeya horyaalka Premier League iyadoo labo kulan oo qura uu harsan yahay dhammaadka horyaalka Ingiriiska.
Waxaa haddaba la shaaciyey shan qalad oo la sheegay inuu sameeyey tababaraha reer Talyaani ee Antonio Conte oo saameyn ku yeeshay kooxda, isla markaana sababay in xilli ciyaareedkii Chelsea uu burburo, waxaana ay kala yihiin:-
1- INUU XAL U WAAYEY JAH-WAREERKA KOOXDIISA
>- Macallin Antonio Conte waxa uu awoodi waayey inuu wax ka qabto xaaladda jah-wareerka ee ay gashay kooxdiisa Chelsea, isagoo xitaa ku guuldarreystay inuu sameeyo shax ay kooxdu kaga bixi karto xaaladda ay shagay, tiiyoo ay jirto inuu kooxaha waa weyn iska dhicin waayey kulamadii adkaa.
2- INUU SAMEYSAN WAAYEY SHAX FADHISA OO AAN GUUR-GUURIN
>- Conte waxaa lagu dhaliilay inuu sameysan waayey shax fadhisa oo aan guur-guurin ama 11-ciyaaryahan oo si joogto ah ugu soo bilowda safka hore ee kooxdiisa xilli ciyaareedkan, taasoo ka mid ah qodobada bur-burka u horseeday Blues.
3- INUU DAGAAL AFKA AH LA GALAY JOSE MOURINHO
>- Macallin Conte waxa uu waayey kalsoonida maamulka kooxda iyo taageerayaasha Chelsea kaddib dagaalkii dhanka afka ahaa ee uu la galay Jose Mourinho, waxaana uu isku mashquuliyey arrimo aan loo baahnayn iyadoo howl oculus horyaalaan.
4- INUU QAATAY GO’AANO QALDAN OO DHANKA SUUQA YURUB AH
>- Tababaraha reer Talyaani waxaa lagu eedeeyey go’aamo qaldan oo dhanka suuqa ah oo uu qaatay xilli ciyaareedkan, siiba go’aannadii uu kooxda kaga diray Matic iyo Costa & Xiddigihii uu kooxda keenay oo aan noqon kuwii ku habboonaa.
5- INUU DAGAAL LA GALAY MAAMULKA
>- Conte inti lagu jiray xilli ciyaareedkan waxa ay isku dhaceen maamulka kooxda Chelsea, isku dhacyadaas haddii aan mid iyo labo ka soo qaadanana Agaasime Emanuelle ayaa shaqada isaga tagay, halka sidoo kalena gabadha talada kooxda ka go’do ee Marina Granovskaia ay is maan-dhaafeen macallinkan reer Talyaani.
Real Madrid Oo Dooneysa In Ay Dalab Rasmi Ah Ka Gudbiso Goolhaayaha Roma Alisson Becker
Shaxda rasmiga ah ee kooxaha Leicester City iyo Arsenal oo la shaaciyey – Yaa ku soo bilowday kulanka ka dhacaya King Power?